रावलजी, सफेद झुट सच्याउनु होला ! « Post Khabar
Published on:6August, 2019 7:18 am
दुईदिनसम्म कटु सत्यबारे नलेखुँ बनेर बसें तर सकिन । आजका चर्चित नेकपाका नेता भीमबहादुर रावलको अनलाइन खबरको अन्तरवार्ता पढियो। उनी राष्ट्र, जनता र पार्टीका लागि सक्रिय रहेको ज्ञात भयो। अहिलेका कुरा ठीकै होलान् भए पनि उहिलेका कुरा भने उहाँले सच्याउनु जरुरी छ ।उहाँले भनेका दुई कुरा प्रति मेरो ध्यान गयो । पहिलो कुरा २०३५ सालमा अखिलको अध्यक्ष पद साथीको आग्रहले छाडें र दोस्रो कुरा २०४८ सालमा मैले मन्त्रि पद छाडेकाले झलनाथ खनाल मन्त्रि हुन पाए।
पहिलो कुरा उनी २०३५/०३६ को छात्र आन्दोलनमा सरिक नै थिएनन्, तत्कालिन मालेका विद्यार्थीको अगुवाइ टङ्क कार्की लगायतबाट हामीहरु आन्दोलनमा सहभागी भएका थियौं। त्यसबेला निर्विवाद टङ्क कार्की नेता थिए । तर, पार्टी स्वतन्त्रता नचाहने पक्षको संस्थापनले गरेको ०३९ सालको विचारको दमन र पजनीका कारण टङ्क कार्की मूलधारको राजनीतिबाट हुत्याइए । त्यसपछि माले भित्र रावलजीलाई कुनैपनि सँगठनको नेता बनाउने मत कहिले पनि बनेको थिएन। अध्यक्ष साथीलाई छाड्ने रावलजीलाई अखिलको अरु पदाधिकारी बनाइएन खाली सुदुर पश्चिमको प्रतिनिधित्व गराउन केन्द्रीय सदस्यमात्र बनाइएका थिए।
उनी अखिलको केन्द्रीय सदस्य भएपछि प्रचार विभागका प्रमुख बनेका थिए । त्यसबेला पनि, उनले गडबडी निम्त्याएका थिए । उनीसित मत बझाएका कारण प्रचार विभाग नै भङ्ग गरे, त्यसको प्रतिरोधमा जागृत भेटवाल (स्वर्गीय), भावुक घिमिरे, काठमाडौं जिल्ला कमिटीका अधिकांशले वगावत गरे। पछि हाम्रा मेहनतले केही सेटल गरियो। उनी पदावधि सकिए पछि कहिले नेपाल बारको प्रोजेक्ट अफिसर र कहिले युएन भोलियन्टियरमा लागे । त्यसो त उनी कुमार विक्रमको अगुवाईमा टियूको सिनासमा पनि जागिरे थिए ।
उनी ०४६को जनआन्दोलनको बेला कम्वोडियामा युएन भोलियन्टियर थिए । त्यसको कन्ट्रयाक्ट सकिएपछि उनी नेपाल फर्के । जनआन्दोलनपछि मदन कमरेड सरकारमा नजाने भएपछि दोस्रा नेता झलनाथ सरकारमा जाने निश्चित नै थियो । उनले पार्टी भूमिगत राख्ने भएकाले मलाई मन्त्रि खान भनिएको बताएका छन् । यो सरासर झुठ हो । सरकार बन्नुभन्दा अघि नै झलनाथ खनाल खुलामञ्चमा खुलेर नै बोलीसकेका थिए । मन्त्रि पद नखाने तर झलनाथ खनालको सल्लाहकार बन्नाले उहाँको त्यस बेलाको हैसियत प्रष्ट हुन्छ ।
रावलजी अहिले महान बन्नु भएकोछ, म स्वीकार गर्न बाध्य छु । मेरो अनुरोध छ, विगतमा आफूले अरुका लागि महान त्याग गरेको कुरा नगर्नु होला । विगतका कुरा उक्किन सक्छन् । म दावासाथ भन्न सक्छु, तपाईंजस्तो असहिष्णु कम्युनिष्ट अगुवा तपाईं युएन भोलियन्टर भएर गएको देशको पोलपोट मात्र थिए । तपाईं कार्यकर्तालाई ठीक पार्न प्रख्यात हुनुहुन्छ । तपाईंले जागृत र भावुक घिमिरे देखि हिमाञ्चल राजलाई सदस्यताबाट पजनी गर्नु भएको छ । हाल ७ नं प्रदेशमा तपाईंको सेकाइले कार्यकर्ताहरु ज्यादै खुशहालमा छन् ।
कृपया टङ्क कार्कीलाई अध्यक्ष र झलनाथका लागि मन्त्रि त्याग गरें भन्ने कुरा सच्याउन लगाउनु होला । (कोमल भट्टराईको फेसबुक ( https://www.facebook.com/komal.bhattarai.39 ) बाट साभार गरिएको)
घरमा बस्दाबस्दै अक्सिजनको मात्रा घट्न थाले कोभिडका बिरामीले के गर्नैपर्छ? डा. अनुप सुवेदी
एमालेका नेता भट्टराईको मध्यरातमा ट्विट ! ट्विटमाथी व्यङ्ग्य प्रहार
एमालेका नेता भट्टराईको मध्यरातमा ट्विट ! ट्विटमाथी व्यङ्ग्य
एमालेका प्रभावशाली नेता लालबाबु पण्डितले लेखे कडा स्टाटस
एमाले संसदीयदलका बैठकमा चार सदस्य अनुपस्थित भएपछी